Booliska Dalka Maraykanka oo Soo Bandhigay Magaca iyo Sawirka Ninkii Weerarka Qaaday (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Ciidamada booliiska ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen askari katirsanaa ciidanka Mareykanka oo xalay toogasho ugaystay dad badan oo ku sugnaa garoonka Diyaaradaha laga raaco ee Fort Lauderdale .
Askariga dilka geestay oo watay bistoolad u sharciyeesneed ayaa magaciisa lagu sheegay Esteban Santiago oo 26-sano jir ahaa, askarigan ayaana markii uu boorsadii uu watay kala soo degay Diyaarad ayuu bistooladiisa kala soo baxay, waxaana uuna xabad ku bilaabay dadkii ku sugnaa garoonka diyaaradaha.
Weerarkani ayuu boolisku Sheegay inay ku dhinteen 5-qof halka ay ku dhaawacmeen 8-qof oo kale, waxaana markii dambe ninkan gacanta ku dhigay ciidamada booliiska oo hadda weli ku wada baaritaano ku aadan weerarka uu geestay.
Esteban Santiago ayaa la sheegay in uu horey uga soo dagaalamay dalka Ciraaq , waxaana askarigan uu ka cabanayay in lagu qasbay inuu ka dagaalamo dalka Ciraaq sidoo kale uu daawado muuqaalo argagax leh ay soo duubeen Kooxda Daacish.
Warbaahinta dalka Mareykanka oo soo xiganeysa saraakiil ayaa sheegeysa in wererarkan uusan u muuqan mid argagaxiso, waxa ayna Warbaahinta tilmaameen inay suurto gal tahay in askarigan dilka geestay uu isku buuqsanyahay qabana xanuunka loo yaqaan (post-traumatic stress).